China YF-T10 Makuru Makeup Vanity ane Kuchengeta Masherufu uye Dhirowa Mugadziri uye Mutengesi | Yifan
YF-T10 Makuru Makeup Asina maturo neKuchengeta Masherufu uye Madhirowa
Stage yekurara fanicha kubva kuItaly, inochinjika, yepamusoro mhando kuunganidzwa kwemubhedha makabati, zvipfuva zvemadhirowa uye ekupfekedza matafura mune yakafara sarudzo yemhando dzakasiyana.
DZICHIBUDA Kuchengeta, Dhirowa, Inobviswa Mirror
ZVINOKOSHA Yakakwira gloss MDF bhodhi + isina simbi makumbo
TABLE DIMENSION 1200 * 500 * 750mm
Izvi zvakanaka zvekushongedza zvisina maturo zvine dhizaini inoyevedza ine yakasarudzika inobata pamadhirowa. Ruvara rwe beige runoramba ruchitaridzika rwakachena uye rwakakura. Izvo hazvina maturo zvine mana dhirowa. Iyo seti inosanganisira chigaro, girazi, uye zvisina maturo.
Iyo Stage yekupfeka tafura ine 3 dhirowa chifuva chemadhirowa ine 7cm kumusoro, base uye padivi pani. Ose ari maviri epamusoro uye chipfuva anowanikwa muhupamhi hwakati wandei, asi hurefu chete.
Yakakura Kuchengeta: mana madhiri anokupa inokwana nzvimbo yekuchengetera kuronga zvishongo zvako, zvishongedzo zvevhudzi, nzara polish, zvigadzirwa zvekuchengetedza bvudzi uye zvigadzirwa.
Kakawanda Kushandisa: Iyo haingoshanda chete setafura yekupfeka kupa inonaka nzvimbo yekuita bvudzi rako uye kugadzira, asi zvakare inogona kushandiswa sekudzidza kana tafura yehofisi kana uchifambisa girazi.
Iyi tafura yezvisina basa mupfeki chipo chinonakidza chevasikana. Yakashongedzwa uye inoyevedza chitarisiko chakavezwa dhizaini ichave yakashongedzwa zvakakwana. Tafura yepamusoro petafura uye mana akadzika madhirowa anopa yakawanda nzvimbo yekuchengetedza kuti ikubatsire kuronga zvishongo zvako, zvipoda nezvimwe. Chimwe chehunhu hukuru pane iyi tafura yekupfekedza ndeyekuti ine girazi rinotenderera re360 ° iro rinopa kutarisisa kwakazara kuitira kuti uve nechokwadi chekuti unotaridzika kubva kumativi ese. Unogona kuishandisa seye yekushongedza tafura uye yekunyora tafura yakaiswa.
TABLE DIMENSION: 1200 * 500 * 750mm
STYLE: Luxury & Yemazuva ano Yakashongedzwa uye yazvino dhizaini, yakasarudzika chena chitarisiko uye chazvino chimiro dhizaini, Iyo yakasarudzika imba masitayiti iyo anovhenekera kune rimwe divi rehupenyu hwako
ZVINOKOSHA: Chena + Goridhe kudhinda Stainless simbi makumbo Zvishandiso: E1 giredhi particle bhodhi + poda yakavharwa simbi furemu
Nyore kuungana, maturusi uye kuraira zvinosanganisirwa.
Pashure: YF-T8 kona yakazara nepamusoro-soro kupfeka tafura
Zvadaro: YF-T11 velvet umbozha maturo
Kupfeka Tafura Ine Mirror Uye Stool
Yakakwirira Gloss Kupfeka Tafura
Hotera Kupfeka Tafura
Yakagadzirwa Kupfeka Tafura Nemadhirowa
Diki Kupfeka Tafura
YF-T15 yakakwirira Gloss Peta-up girazi Maturo
YF-T7 Makeup Vanity TafuraLarge Mirror & Ca ...
Oak makumbo Makeup Tafura